Battery Capacity နည်းသွားတဲ့ iPhone တွေဟာ Performance လျော့သွားမှာဖြစ်ကြောင်း Apple အတည်ပြု
visibility 2600 Views
iPhone6နဲ့ 6s, iPhone7နဲ့7Plus ကိုင်နေတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ မိမိကိုင်နေတဲ့ iPhone က သုံးရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း လေးလာတာကို သတိထားမိကြမှာပါ။ တစ်ချို့တွေကျတော့လည်း မထင်မှတ်ပဲ ဖုန်းက Shutdown ကျသွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်ဖူးကြမှာပါ။
ဒါပေမယ့် ဒီအချက်က ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလည်း ဆိုတာကိုတော့ Apple ကလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောထားသလို Apple ပရိတ်သတ်တွေကလည်း ဖုန်းလေးလာရင် အသစ်တစ်လုံး ဝယ်လိုက်ကြတာက များပါတယ်။ iPhone မော်ဒယ်လ် အဟောင်းတွေ Performance ကျသွားပြီး လေးသွားရတာက အခြား Hardware အစိတ်အပိုင်းတွေကြောင့် မဟုတ်ပဲ Battery က ဟောင်းသွားပြီး Capacity နည်းသွားရတာကြောင့်လို့ Apple က အတည်ပြုပေးလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Apple ဘက်က ဖွင့်ပြောချင်လွန်းလို့ ဖွင့်ပြောတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ Geekbench က Developer တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ John Poole ရဲ့ စမ်းသပ်မှုက Reddit နဲ့ နည်းပညာ Website တွေမှာ ပွသွားလို့ ဖြစ်ပါတယ်။ John Poole ကိုတော့ ကျေးဇူးတင်ရမယ် ထင်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စမ်းသပ်ချက်အရ iPhone မော်ဒယ်လ် အဟောင်းတွေ မလိုအပ်ပဲ Shutdown ခဏ၊ ခဏ ကျမသွားစေဖို့အတွက် Apple က iPhone မော်ဒယ်လ် တစ်ခုချင်းစီအတွက် iOS Update တွေတိုင်းမှာ CPU ကို Throttling လုပ်လိုက်တဲ့ Fix တွေ ထည့်ပေးနေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ iOS 11.2.0 မှာလည်း iPhone7နဲ့7PLus တို့လို မော်ဒယ်လ် အဟောင်းတွေအတွက် ဒီလို Fix မျိုး ပါလာတာကို တွေ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
John Poole ကတော့
“အမှန်တကယ် ဖြစ်သင့်တာက Fix လည်းထုတ်ပေး၊ အသုံးပြုသူတွေ သိသွားအောင်လည်း လုပ်ပေးရမှာဗျ။ တိတိကျကျ မပြောထားတဲ့အတွက် အသုံးပြုသူတွေ အနေနဲ့ ကိုယ်ကိုင်နေတဲ့ ဖုန်းက လေးလာပြီဆိုရင် Battery ပဲ လဲလိုက်ရတော့မှာလား? ဖုန်းအသစ်ပဲ ထပ်ဝယ်လိုက်ရတော့မှာလား? ဆိုပြီး ဇဝေဇဝါ ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်”
တစ်ချို့ iPhone မော်ဒယ်လ်အဟောင်းတွေ အသုံးပြုနေကြတဲ့သူတွေကတော့ Battery လဲလိုက်တဲ့အခါမှာ CUP Frequency က နဂိုအတိုင်း ပြန်ဖြစ်သွားတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ် (အပေါ်က Tweet မှာ ကြည့်ကြည့်ပါ)။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်ပြီး The Verge ကနေ Apple ကို မေးမြန်းခဲ့ရာမှာတော့
“Lithium-ion Battery တွေက ဟောင်းသွားပြီဆိုရင် Capacity နည်းသွားတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခြား Hardware Component တွေကို မထိခိုက်စေဖို့အတွက် Shutdown ချပစ်ရပါတယ်။ မနှစ်ကတုန်းက Apple အနေနဲ့ ဒီပြဿနာ ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ iPhone 6, 6s နဲ့ SE တို့အတွက် Fix ထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အခုနှစ်ထဲမှာလည်း ဒီ Fix ပါဝင်တဲ့ iOS 11.2 ကို iPhone7နဲ့7Plus တို့အတွက် ထုတ်ပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ထပ်လည်း အခြား iPhone မော်ဒယ်လ်တွေအတွက် Fix ကို ထုတ်ပေးသွားဦးမှာပါ”
ဆိုတော့ ပြောရရင် Apple က တစ်ဘက်လှည့်နဲ့ ဖြေသွားတာပါပဲ။ Battery ဟောင်းသွားတာကြောင့် Performance ထိခိုက်မှုရှိမှာကို မဖြေပဲနဲ့ Battery ကြောင့် ဖုန်းက မထင်မှတ်ထားတဲ့ Shutdown တွေဖြစ်လို့ Fix ထုတ်ပေးတယ် ဆိုတာကိုပဲ ဦးစားပေးပြီး ဖြေသွားတာပါ။
Battery ဟောင်းသွားရင် ဖုန်းက မထင်မှတ်ပဲ Shutdown တွေ ခဏ၊ ခဏ ဖြစ်မယ်၊ Performance ကျသွားမယ်ဆိုတဲ့ အချက်က လက်ခံပေးလို့ရပါတယ်။ ဘာကိစ္စ Battery ဟောင်းသွားတာကြောင့် Performance ထိခိုက်မှုရှိမယ် ဆိုတဲ့ အချက်ကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မပြောတာလည်း ဆိုတာကို စဉ်းစားလို့ မရပါဘူး။ ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ iPhone မော်ဒယ်လ်အဟောင်း အသုံးပြုနေသူတွေကို Battery လဲလိုက်ရင် ရရှိမယ့် အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောပြသင့်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချကြပါတယ်။
The Verge iFixit
iPhone Battery Lithium-Ion Battery Mobile CPU Apple